Waa maxay sababta iyo sida Oysters Samee Jawhar - Rule News
Waa maxay sababta iyo sida Oysters Samee Jawhar
Oysters luul ka dhigi doonaa sida jawaab daafac in walxaha shisheeye.
Geedi socodka bilaabmaa marka qaar ka mid ah jirka ajnabi ah, sida cammuudda, noole ama qaar ka mid ah qalab kale organic, maamushaa si ay u soo socdo gudaha qolof lohod iyo ku yimaado xiriir la go'iisii, lakabka ilaaliya xubnaha gudaha lohod ee, mararka qaar xitaa waa dhaawac.
jirka lohod ee arka maalkii duuleen sida ay khatar ku iman kara, iyo in jawaab go'iisii ​​uu bilaabo inuu aamino nacre maandooriyaha loo yaqaan, sidoo kale loo yaqaan hooyada of luul ah, waxaa gal. Tani waa walax la mid ah in jubbado qaybta hoose oo qolof.
← Mark Zuckerberg ayaa noqonaya qofka lixaad ee ugu qanisan on Earth Maxaa ilig-maroodi ah ee na barayaa ku saabsan horumar →